Ny Tontolon’ny Blaogy Siriàna Tanatin’ny Herinandro-2 · Global Voices teny Malagasy
Ny Tontolon'ny Blaogy Siriàna Tanatin'ny Herinandro-2
Voadika ny 23 Oktobra 2018 4:59 GMT
Nanao dingana lehibe iray ny tontolon'ny blaogy Siriàna tamin'ity herinandro ity, tamin'ny fanolorana ny Syria Planet. Vavahady voalohany anaty aterineto natokana ho an'ireo Siriàna rehetra mpitoraka blaogy. Namporisihin'ny firoboroboan'ny bilaogy, vavolombelon'izany i Siria tamin'ny taona lasa (2005).
Ayman Hourieh, iray amin'ireo Mpandrindra ny Syria Planet no niteny …
Efa mandeha anaty aterineto izao ny Syria Planet, ilay tranonkalan'ny vondrom-piarahamonina ho an'ireo Siriàna mpitoraka blaogy, ahitàna mpanambatra ireo bilaogy mpikambana ao aminy (Siriàna na momba an'i Siria), sehatra fifampiresahana (na karajia) natao hikarakarana hetsika sy fivoriana, ary hifanakalozana hevitra momba ny zava-mitranga ao Siria sy ny tontolon'ny bilaogy, ankoatra ny zavatra hafa. (fanamarihana: efa tapaka ny rohy nahafahana niditra tamin'ilay vavahadin-tserasera voaresaky ny lahatsoratra)
Eo amin'ny lafiny politika, ity herinandro ity no tena manan-danja sy be raharaha tokoa ho an'i Siria. Ny 8 martsa no nankalazàna ny faha-43 taonan'ny fanonganam-panjakana nataon'ny antoko Baath ny taona 1963. Izay nahatonga fidinana an-dalàmbe isan-taona maro sy fivorian'ireo antoko mpanohitra ho fanoherana ny fitondrana antoko tokana mbola misy hatramin'izao, ao koa ny lalàna mifehy ny tany latsaka an-katerena nanankery efa hatramin'ny 9 Martsa 1963.
Nanoritsoritra ny hetsika nataon'ireo antoko mpanohitra tamin'ity taona ity i Ammar Abdulhamid…
Tao Londona, tetsy ankilany, nisy fitorevahana teraka avy amin'ny fivoriana nokarakarain'ireo vondrona mpanohitra maro teo anoloan'ny Masoivoho Siriana ho fahatsiarovana ny fanonganam-panjakana nataon'ny Baath ny 8 Martsa 1963. Hetsika hafa mitovy amin'izany teo amin'ny Oniversiten'i Damaskosy no ravan'ny herisetra nataon'ireo andianà mpianatra niaraka tamin'ireo sampam-piarovana isankarazany misy ao amin'ny firenena. Tao anatin'izany hetsika izany, no voavely kibay ka tsy nahatsiaro tena ilay mpanoratra Samar Yazbek .
Naneho ny heviny momba io fotoana io koa i Rime Allafa, sy momba ny lalànan'ilay antoko efa nandrasana hatry ny ela izay heverina fa ho ampiharina afaka volana vitsivitsy.
Ny revolisiona malazan'ny 8 Martsa, ankalazain'ny ankamaroan'ireo lehilahy be hambo mpanao fanatanjahantena mitondra ny volom-bavan'ny 8 Martsa (sy ireo lehilahy hafa niezaka nanabe azy ireny nefa tsy nahomby) androany ny faha 43 taonany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, arahaba no tokony hatolotra ny vahoaka Siriana sy ny toerana mampalahelo misy ny fanjakana Siriana. Raha tokony hanome làlana ho an'ireo antoko politika vaovao izay andraindrain'ny rehetra amin'izao, ny Baath dia vao maika manatsatoka ny tongony ary manofahofa ny Andininy faha-8 amin'ny lalàm-panorenana eo anoloantsika.
Manana lahatsoratra mafaitra mikasika izany ihany koa i Yazan.
43 taonan'ny “Revolisiona”…
43 taonan'ny Lalàna mifehy ny tany latasaka an-katerena.
43 taonan'ny fampihorohoroana eken'ny lalàna.
43 taonan'ny famoretana ara-politika eken'ny lalàna.
43 taonan'ny risoriso eken'ny lalàna.
Nampakatra lahatsoratra nanakiana mafy ilay masoivohom-baovao ofisialy Siriana (SANA) izay tantanan'ny fitondrana ny Innocent Criminal, nanakiana ny tsy fahampiana sy ny tsy fisian'ny fahaiza-manaony.
Ahoana ary nahoana no fatin-javatra tahaka ny an'ireo Arabo mamely an'i Siria, hoy ny mpanolotsaina ny filoha Sodane, no lasa fatina lohatenin-dahatsoratrareo ? Inona no olan'ireo tsy misy saina ireo ? Tsy gazety Siriana Arabo mpivoaka isanandro io, izay anekena fahatany any fotsiny ny resaka ataon'ny governemanta. Fa fampahalalam-baovao Anglisy afaka vakian'ny rehetra io. Noho izany, maninona izy ireo no tsy mampiasa azy io hanehoana ny heviny amin'ny fomba mihajahaja kokoa fa tsy mandanilany fahatany ny toerana dizitaly natao ho fitahirizana aminà fatina aretim-pivalànan mitovy amin'ny tay ?
Lavitry ny politika, manana lahatsoratra mahaliana i Strontiuma momba ny vona Celtes, izay nanombatombanany fa mety ho marina ny hoe ny rafitra trano Siriana tamin'ny vanim-potoana Hellenistika sy ny Romanina no mety ho fiandohana tsy fanta-piavian'io karazana fandravahana iray io.
Ny randrana, izay modely ampiasàna tady tsy mifatotra fa mifangaroharo, no karazana vona tranainy indrindra fantatra. Tsy ny “Celtes” ihany anefa no manao izany randrana izany, fa misy toy izany ihany koa any amin'ireo kolontsaina maro hafa. Afaka ny hahazo karazana vona ianao, raha tapahana ireo randrana ka atambatambatra indray. Tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faha 8 tany Italia no nahitàna ohatra voalohany tamin'izany, kanefa efa nahitàna tsirinà fandrandranana sy vona fahagola ihany tao amin'ny haikanto Siriana tamin'ny vanim-potoanan'ny helenistika, Romanina sy Bizantina.
Farany, lahatsoratra mampihomehy iray avy amin'i Bassam momba ny zavatra niainany sy ny an'ny hafa tao amin'ny fitantanan-draharahan'ny biraon'ireo foibe fanarahamaso ny eny an'habakabaka tsy takamaso, sy ny fomba famitahana ahafahana miala tsy hanao raharaha miaramila.
– Lehilahy iray no mody nilaza fa nisy fandidisna natao tao amin'ny lamosiny noho ny “olan'ny taolan-damosina” mahazo azy ary nitondra sary niaraka taminy. Araka ny hita, nanao fandindina teo amin'ny hoditra ivelany ilay dokoterany ary nanidy ilay ratra, tsy nisy zavatra hafa nataony, araky izany. Nosamborina izy ary natolotra ny manampahefana.